Izindaba - Ubuchwepheshe be-RFID buye bathuthukisa kakhulu izinga lokuphatha lemboni yokuwasha
I-RFID PPS Laundry Tag
Ubuchwepheshe be-RFID buye bathuthukisa kakhulu izinga lokuphatha embonini yokuwasha
Njengoba sonke sazi, ukusetshenziswa kwe-RFID embonini yezingubo sekuvame kakhulu, futhi kungaletha intuthuko ephawulekayo ezicini eziningi, okwenza izinga lokuphathwa kwedijithali yomkhakha wonke libe ngcono kakhulu. Kodwa-ke, eminyakeni yamuva, imboni yokuwasha, eseduze kakhulu nemboni yezingubo, iphinde yathola ukuthi ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-RFID kungaletha izinzuzo eziningi.
Njengamanje, embonini yokuwasha, umsebenzi wokuphatha idatha wenziwa kakhulu ngesandla. Ngakho-ke, ngokuvamile abukho ubufakazi bokunemba kwe-inventory, ukuqapha imvamisa yokugeza yelineni, inani lemithi yokwelapha yokungcolisa kakhulu, nokulahlekelwa kwelineni. Ingalandelwa futhi ilethe izinkinga eziningi kubaphathi belineni.
Ngaphambi kokugeza ilineni, imboni yokuwasha idinga ukubona ukwelashwa ngokwezigaba ngokuya kombala, ukuthungwa, isigaba sokusebenzisa, nesigaba sokungcola. Ukucubungula okwenziwa mathupha kuvame ukudinga abantu abangu-2~8 ukuthi bachithe amahora ambalwa ukuze bahlele amalineni ahlukene abe ama-chute ahlukene, okudla isikhathi impela.
Ukwengeza, indlela yokuphatha ukulahlekelwa kusixhumanisi sokulawula ukuhleleka, indlela yokungenelela lapho inani lokunikezwa likhulu noma lincane; indlela yokuqapha izinga lokungcola okukhulu, isimangalo, ukulandelela umzimba wangaphandle, nokulandeleka kokuhlukunyezwa kusixhumanisi sokulandelela ilineni; indlela yokuqapha imisebenzi yokuwasha, isimo sokukhiqiza kanye nendwangu kusixhumanisi sokuphatha kwedijithali Ukuqapha ukulahleka kotshani nokuhlala isikhathi eside, izinga lokusebenzisa ukujikeleza kwelineni, i-inventory yehhotela kanye nokulawulwa kwelineni ye-zombie, njll. zonke izindawo lapho i-RFID ingabamba khona indima.
Kungashiwo ukuthi ubuchwepheshe be-RFID belethe izinguquko ezintsha embonini yokuwasha. Amathegi okugeza e-RFID angasiza ekuhlonzeni isikhathi sokugeza, izidingo zokugeza, ulwazi lwekhasimende kanye nemvamisa yokugeza izinto ezirekhodiwe, kunciphise izinga lephutha lesikhathi sokusebenza kwesandla esivamile, futhi kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokuphatha.
Kodwa-ke, ekusebenziseni okungokoqobo, kuphinde kube nobunzima obuthile, okuhlanganisa izindwangu, ukupakishwa kwamalebula nokugoba, umswakama, izinga lokushisa nezinye izinto eziningi ezizothinta umphumela wokufunda welebula. Kodwa-ke, ukuze kuhlangatshezwane nezinselele kangcono, abakhiqizi be-RFID baye bahlakulela ukuguquguquka I-RFID amathegi ewasha angalukiwe, I-RFID inkinobho yokuwasha amathegi, amathegi e-silicone elondolo kanye namanye amathegi ezinto eziningi, afaneleka izinto ezahlukene zelineni, izinga lokushisa lokugeza, nezindlela zokugeza.
Kungashiwo ukuthi ubuchwepheshe be-RFID belethe izinguquko ezintsha embonini yokuwasha. I-RFID yokugeza Iwashi amathegi ingasiza ekuboneni isikhathi sokugeza, izidingo zokugeza, ulwazi lwekhasimende kanye nemvamisa yokugeza izinto ezirekhodiwe, ukunciphisa izinga lephutha lesikhathi sokusebenza kwesandla esivamile, futhi kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokuphatha.
Kodwa-ke, ekusebenziseni okungokoqobo, kuphinde kube nobunzima obuthile, okuhlanganisa izindwangu, ukupakishwa kwamalebula nokugoba, umswakama, izinga lokushisa nezinye izinto eziningi ezizothinta umphumela wokufunda welebula. Kodwa-ke, ukuze kuhlangatshezwane nezinselele kangcono, abakhiqizi be-RFID bathuthukise amathegi ewasha angalukiwe aguquguqukayo, amathegi ewasha izinkinobho, amathegi e-silicone elondolo namanye ama-multi-material, afanele izinto ezihlukene zelineni, amazinga okushisa okuwasha, nezindlela zokuwasha.